Angịlịkan: Anyị achọghị ndị ochị ehi n'Imo Steeti - BBC News Ìgbò
Angịlịkan: Anyị achọghị ndị ochị ehi n'Imo Steeti
2 Febrụwarị 2018
Nkenke aha onyonyo Ụka Anglịkan na onyeisi ya bụ Peter Akinọla nwere ọtụtụ ndị na-esọ ya n'ọdịda anyanwụ Naijiria
Otu jikọtara ndị isi ụlọụka Angịlịka n'Owere (Owerri) bụ Ecclesiastical Province of Anglican Communion na bekee agwala ndị omeiwu Imo Steeti ka ha mepụta iwu ga-emechi ịchịgharị ehi n'okporo ụzọ.
Otu a kwuru ka e mee ngwangwa nye iwu ga-akwụsị iji akụ nke Steeti ahụ na-akwalite azụmaahịa nke mmadụ nwere dịka ịzụ ehi nakwa ịchịgharị ehi n'okporo ụzọ
Ndị tinyere aka n'akwụkwọ ozi a bụ Rt Rev David O C Onuoha bụ onyeisi oche Kọmiti, Archbishop Caleb Moduoma na onye Chansellọ bụ Michael Uzoma na ngụcha mkparịta ụka ha nwere n'Atta Ikeduru dị n' Imo Steeti n'abalị iri atọ nke ọnwa Jenụwarị.
Egwu ndị Fulani na-achị ehi ejidela ọtụtụ
Onyeisi ụka ahụ kwuru, "Otu a ahụtala ụdị ihe ike, ọgbaghara nakwa ịla ndụ na ngwongwo ndị mmadụ n'iyi nke otu Jihad kpọrọ onwe ba ndị na-achị ehi na-eme. Karịsịa atụmatụ a na-eme ka mụba site na-ịmapụtara ha oke maka ịzụ ehi."
Ọ katọrọ nleda anya nke Gọọmenti etiti na-eleda ihe gbasara mwakpo ndị a na-eme ma rịọkwa arịrịọ ka ha mabido ya tupu o bute nsogbu n'ala Naijiria gbaa gburugburu.
Nkenke aha onyonyo Nsogbu dị n'etiti ndị Fulani na-achị ehi bawanyere n'izu ole na ole gara aga
Otu a gwara ndị ụka Kraịst ka ha gbalịa nwete akwụkwọ ike eji e binye aka na ntụliaka ma soro otu ndọrọndọrọ ọchịchị.
Okwu ndị a bịara n'ime ụbọchị ole na ole Kọmishịọna ndị uweojii n'Imo Steeti, otu Myetti Allah, ndị eze ọdịnala nakwa ụfọdụ ndị ọrụụbị nwechara mkparịta ụka ebe ha mere mkpebi ụzọ a ga-eji mee ka ndị na-achị na ndị ọrụugbo biri n'udo na steeti ahụ.
'Ụmụakwụkwọ 105 ka na-efu na Dapchi'
Ụlọụka agbala umunne akwụkwọ
'Tinye nwa gị n'ụlọakwụkwọ maọbụ ije nga'
US ga-etinye iwu kachasị nke maka N Korea
'Ọrụ karịrị akarị n'Alaba international'
Gbasaa ozi n'aka anyị
Nhọrọ mgbasa ozi
Copyright © 2018 BBC. BBC anaghị ahụta maka ọdịnaya nke saịtị ndị dị na mpụga. Usoro anyị maka njikọ dị na mpụga